ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၃၊ ဒုတိယပိုင်း) – Paris Maung | MoeMaKa Burmese News & Media
ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၃၊ ဒုတိယပိုင်း)
ပါရီမောင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ်စဉ် တက်ဆက်မည်)
Lesson3( Leçon3) အပိုင်း (၂ )
Noun , Accents & Vocabulary ( Nom,Accents et Vocabulaire )
နာမ်များ ၊အသံထွက်သင်္ကေတများ နှင့် ဝေါဟာရများ
နာမ်များ ရဲ့ရှေ့မှာအမြဲလိုလိုတွဲ သုံးရတဲ့ Article တွေကိုပါ ထဲ့ပြောနေရတော့ ဒါတွေကို ဘယ်လို အသံထွက် ရမလဲဆိုတာ မဖြစ်မနေ သိဖို့ လိုလာပါပြီ။ ကိုယ်လေ့လာထားပြီး တတ်ထားတဲ့ ပြင်သစ်စာ ကို တလုံးပဲဖြစ်နေပါစေ အသံထွက် မှန်မှန်ထွက်ပြီး ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရေး တတ်ရင်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါလား။
ဝေါဟာရတိုးပွါးရန် ဆက်လက်လေ့လာဖို့ လင့်တွေပေးလိုက်ပါတယ်
အဲဒီလင့်တွေကနေ ဆက်စပ်ပြီး တခြားပြင်သစ်စာ ဗီဒီယို ကလစ်တွေကို ကြိုးစား ကျက်မှတ်တဲ့သူတွေ ရှိရင်လဲ ပါရီမောင် စိတ်မဆိုးဘူးနော်။ အသံထွက်ကောင်းတဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်ပြီး စာလုံး ရေးပြထားတာကို ရွေးစေချင်တယ်။ နားထောင်ရင်း တလက်စထဲ ဝေါဟာရတွေကို ရေးမှတ်ထားပါ။ အင်တာနက် ကိုးနတ်ရှင် မရှိတဲ့ အခါတွေမှာပါ လေ့လာနိုင်အောင်လို့ပါ။ ဗီဒီယိုကလစ်ကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားပြီး လေ့လာနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။
အမျိုးသမီး အသုံးအဆောင်နှင့် အဝတ်အထည်များ
Les vêtements et et accessoires pour femme
သတိထားကြည့်ရင် “e” နဲ့ အဆုံးသတ်ပေမဲ့ အဖိုနာမ် Masculin ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ပစ္စည်းတွေရဲ့ အခေါ်အဝေါ် နဲ့ပါတ်သက်လို့ကတော့ ဦးထုပ်၊ အင်္ကျီ၊ လက်ကိုင်အိတ် တွေမှာ ပုံစံအလိုက် ကွဲပြားတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေကို လည်း ခွဲခြား မှတ်သားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ ။
အမျိုးသား အသုံးအဆောင်နှင့် အဝတ်အထည်များ
Les vêtements et et accessoires pour homme
ဒီမှာလဲ အသေးစိတ်ခွဲခြားပြောတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။
un pull အန် ပြူးလ် ဆိုတာကို ဆွယ်တာ လက်ရှည် လို့ပဲ မှတ်ရင်ရပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ သုံးတဲ့ အသေးစိတ်ဖေါ်ပြတာကို များသောအားဖြင့် မပြောကြပါဘူး
une chemise အယူးန် ရှမီးဇ် အင်္ကျီ၊ လို့ပြောပါမယ်။ -ette နှင့် အဆုံးသတ် လျှင် ပိုသေးငယ်သော အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်သွားပါသည်။ une chemisette အယူးန်း ရှမီးဇက်ထ် အင်္ကျီသေး
ဥပမာ une fillette အယူးန်းဖီးယက်ထ် အမျိုးသမီးငယ်လေး
Noun ( Noms )အနည်းငယ်နဲ့သူတို့ရဲ့အသံထွက်ကိုထပ်မံ ဖေါ်ပြရရင်
Une voiture (a car) အယူးန်း ဗွါးကျူး ကားတစ်စီး La voiture (the car) လာဗွါးကျူး ထိုကား
Une rose (arose) အယူးန်း ရို့ စ်၊ နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့် La rose ( the rose ) လာရို့ စ် ထိုနှင်းဆီပန်း
Un avion (an aeroplane ) အန်နာဗီယွန်၊လေယာဉ်တစ်စီး L’ avion ( the aeroplane ) လာဗီယွန်ထိုလေယာဉ်
Un colier (anecklace ) အန်ကိုလီယေ၊ ဆွဲကြိုးတစ်ကုံး Le colier( the necklace ) လကိုလီယေ ထိုဆွဲကြိုး
( တကယ်အတိအကျပြောရရင်La voiture ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပြောရရင် the car ကားလို့ပဲ အဓိပါယ်ရပါတယ်။
ထိုကား၊ ဒီကား၊ ဟိုက ကားဆိုရင် သပ်သပ် အတိအကျသုံးရတာတွေ ရှိပါတယ်။)
အထက်ပါ နာမ်များကို ကြည့်ရင် ရှေ့မှာ သုံးထားတဲ့ Article အရ “ကား” ” နှင်းဆီပန်း” ဆိုတာ အမနာမ်တွေဖြစ်မှန်း၊ “လေယာဉ်ပျံ” “ဆွဲကြိုး” ဆိုတာတွေက အထီးနာမ် တွေဖြစ်မှန်း သိကြပါပြီ။အဲဒီနာမ်တွေရဲ့အထီး၊အမဖြစ်မှုကိုဘယ်သောအခါမှမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပြောင်းလဲ၍မရပါ။ ပုံသေမှတ်ထားပြီးသားမို့အသေမှတ်ထားရမှာပါ။
နာမ်များကို အနည်း ကိန်းမှ အများကိန်း သို့ပြောင်းရန်
ပုံမှန် အားဖြင့် နာမ်များသည် သက်ရှိ သို့မဟုတ် သက်မဲ့နာမ် များဖြစ်ကြပြီး အနည်းကိန်းမှ အများကိန်းသို့ ပြောင်းရာတွင်
၁။ သာမန်နာမ်များ အတွက် နာမ်စာလုံးအဆုံးတွင် “s” ထဲ့ပေးရသည်။
un ennui အန်နော်န်နွီ ၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းတခု (သို့) ငြီးခွေ့ခြင်းတခု (ennui အော်န်နွီ )
un lit အန်လီး ကုတင် တလုံး
ခြွင်းချက် အနေနှင့် ” s ” ” x ” ” z ” နှင့် ဆုံးသောနာမ်များ အများကိန်း ဖြစ်စေရန်
“s” ကို မပေါင်းရတော့ပါ ။
ဥပမာ။ un boisသစ်သားတခု — des bois သစ်သားများ
une noix အစေ့တစေ့ — des noix အစေ့များ
un nez နှာခေါင်းတခု — des nez နှာခေါင်းများ
၂။ ” -al “ နှင့် အဆုံးသတ်လျှင် “-aux” သို့ပြောင်းရမည်။
သို့သော် bal, canaval, cérémonial, chacal, choral, festival, pal, récital, régal, santal ….
un chevalအန်ရှဗါးလ်၊မြင်းတကောင် — des chevaux ဒေရှဗိုး ၊ မြင်းများ
un chacal အန်ရှကားလ် ၊ ခွေးအ တကောင် — des chacals ဒေ ရှ ကားလ် ၊ ခွေးအ များ
၃။ “eau” “au” “eu” “oeu” နှင့် အဆုံးသတ်သောစာလုံးများကို ” x “ ပေါင်းထဲ့ပေးရပါသည်။
un veau အန်ဗိုး၊ နွားပေါက်စကလေးတကောင် – des veaux ဒေဗိုး ၊ နွားကလေးများ
un feu အန် ဖှား မီးတခု – des feux ဒေ ဖှား ၊ မီးများ( feu ကိုအသံထွက်အမှန်ရေးပြ၍ မရပါ။ )
un pneu အန်ပနား ၊ ကားဘီးတလုံး-des pneus ဒေပနား ၊ ကားဘီးများ ( pneu လည်းရေးပြရန် ခက်ပါသည်)
Un avion ဆိုတဲ့ အသံထွက် ကိုကြည့်ပါ ။ အန် အာဗီယွန် လို့ မထွက်ပဲ ဘာလို့ အန် နာဗီယွန်ဆိုပြီး ဖြစ်ရပါတယ် ။ ပြင်သစ် အသံထွက် Phonetic သဘောအရ နာမ်တခုရဲ့ရှေ့ဆုံးစာလုံးဟာ
a,e,i,o,u,h ဆိုတဲ့ သရ (Voyel ) တွေနဲ့စရင် သူ့ရဲ့ ရှေ့ကစာလုံးရဲ့ အသံကဆက် သွားရပါတယ်။ ပြင်သစ်တွေက အသံထွက် လှဖို့ ဦးစားပေးပါတယ်။ စာဖတ်သူ အန် အာဗီယွန် ကို အမြန် ရွတ်ဆိုကြည့်ပါ။ အသံထွက် ထောက်နေရာမှ တဆက်တည်း အန် နာဗီယွန် လို့ဆိုသောအခါ မှ အဆင်ပြေ တာကို တွေ့ပါမယ်။
နောက်စာလုံးတခု ဖြစ်တဲ့ L’ avion လာဗီယွန်ကိုကြည့်ပါ။လအာဗီယွန်လို့အသံထွက်ရင်မလှပါဘူး၊လာဗီယွန်ဆိုမှ အသံထွက် ချောမွတ်တာကို သတိပြုမိကြမှာပါ။
ပြင်သစ်စာရဲ့ထုံးစံဖြစ်တဲ့ ရှေ့ပြစ်၊နောက်ပြစ်၊အပေါ်ကအစက်တွေ၊ ” C “ စာလုံးရဲ့အောက်မှာဟထိုးလိုမျိုးထဲ့တာ၊ဒါတွေကို ACCENT, ( ACCENTS ) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Graphic Sign လို့လဲခေါ်နိုင်ပြီး a,e,i,o,u,h ဆိုတဲ့ သရ (Voyel ) စာလုံးတွေပေါ်မှာအသံထွက်အတွက်ထဲ့ပေးရတာတွေပါ။
( é,è,à,ç,ô,ê,ë,ö,û,ï ) အသံထွက်ပုံသင်ခန်းစာတွင်ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်။
(ပြင်သစ်စာလုံးရိုက်ရန်ကွန်ပြူတာတွင်ပြင်သစ်စာ font နှင့် ပြင်သစ် keyboard ရှိလျှင် အဆင်ပြေနိုင်ပါမည်။)
Le avion စာလုံးမှ L’avion ဖြစ်လာပုံကိုရှင်းပါမည်။
Avion သည်အထီးနာမ်ဖြစ်သောကြောင့် သူ့အတွက် Masculin Article ဖြစ်သော “ le ” ကိုရွေးချယ်ရပါသည်။
သို့သော် article နှင့် nounကိုရေးလိုက်သောအခါတွင်သရ၂လုံးဖြစ်သော “e” နှင့် “a” တို့ထပ်နေသည့်အတွက်
Articleတွင်ရှိနေသောသရ ”e” ကိုဖျက်၍ ဖျက်လိုက်သောနေရာတွင် “ ’ ” ကိုထည့်ပေးရပါသည်။
အလားတူပင် l’ami ( the friend ) ထိုသူငယ်ချင်း ဆိုသောစာလုံးတွင် le နှင့် amiတို့ပေါင်းသွားပြီး l’ami လာသည်ကိုသိနိုင်ပါသည်။
မမေ့ရန်မှာ amiဆိုသောနာမ်သည် အထီးကိန်းဖြစ်၍ ယောကျာ်းလေးသူငယ်ချင်းဟုအဓ္ဓိပါယ်ရပြီးထိုစာကြောင်းတခုလုံးကိုချိန်ညှိခြင်း (Agreement) လုပ်သောအခါတွင်အထီးကိန်းများဖြင့်သာလုပ်ရန်။
(အလျင်းသင့်၍ပြောလိုသည်မှာ နာမ် nounများကိုသက်ရှိများအတွက်အဖိုနာမ်မှ အမနာမ်သို့ပြောင်းရာတွင်အကြမ်းအားဖြင့်နာမ်၏နောက်တွင် (e) ထဲ့ပေးရင်ရနိုင်ပါသည်။အားလုံးအတွက်မဆိုလိုပါ။)
ထို့ကြောင့် amie ဆိုလျှင်အမကိန်းဖြစ်သွားပြီးမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းဟုအဓ္ဓိပါယ်ရသွားပါမည်။ထို့ကြောင့်
Une amieဆိုလျင် Article Indéfiniအနေနှင့် မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတယောက်ဟုဆိုနိုင်ပြီးသူ့အကြောင်းဆက်ပြောလျင် Article Défini ဖြစ်သော la ကိုသုံး၍ l’amie ဟုသုံးစွဲပြောဆိုရပြီးစာကြောင်းကိုအမကိန်းအနေနှင့်ချိန်ညှိခြင်း ( Accord ) လုပ်သွားရပါမည်။
ယခုသိထားတဲ့အထိ Article နဲ့ Noun တွေကိုတွဲဖက်ပြီးအရိုးရှင်းဆုံးဝါကျတကြောင်း လုပ်ကြည့်ရအောင်။
” C’est ” … စေ ဆိုသည့်စာလုံးကို အသေးစိတ်သရုပ်မခွဲခင်မှာ ” ဤအရာ သည် ”….( This is …) လို့သာ လောလောဆယ် ပုံသေမှတ်ထားလိုက်ပါတော့။ (အနည်းကိန်းတွင်သာသုံးရန်)
C’est une pomme.ဒါပန်းသီးတလုံးဖြစ်သည်။ (စေတျူး န်း ပေါင်းမ် ) ( စေ အယူးန်း ….. ဟုမထွက်ရပါ )
C’est une voiture. ဒါ ကားတစီး ဖြစ်သည်။ (စေ တျူးန်းဗွားကျူး ) ( စေအယူးန်း ….. ဟုမထွက်ရပါ )
C’est un avion. ဒါ လေယာဉ် တစီး ဖြစ်သည်။ (စေ တန် နာဗီယွန် ) ( စေ အန် အာဗီယွန် ဟုမထွက်ရပါ)
C’est une tomate. စေ တျူန်း တိုမတ် ၊ ဒီဟာခရမ်းချဉ်သီးတလုံးဖြစ်တယ်။
C’est un sac. စေ တန် စပ်ခ် ၊ ဒီဟာ အိတ်တလုံး ဖြစ်တယ်။
သရ (Voyel ) စာလုံးများရဲ့ရှေ့ကအသံဆက်သွားတာကိုသတိထားလေ့ကျင့်ပါ။
ဒါဆိုရင် သိသလောက်စာလုံးတွေနဲ့ (သင်ခန်းစာ ၂ ကစာလုံးတွေနဲ့) တွဲပြီးသုံးရင်ပြင်သစ်လိုပြောတတ်ပြီလို့ပြောနိုင်ပြီပေါ့။လူရှိန်တာပေါ့နော်။
အနီရောင်ဖြင့် အသံဆက်ပုံ ကို ပြထားပါသည်။ စာဖတ်ရာတွင် အသံထွက်၊အသံဆက် မှန်အောင် လေ့ကျင့်ရန် ကိုယ်တိုင် အမှတ်အသားပြုကြပါရန်။
Exception : အဆုံးသတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော စာလုံး တချို့
un arbre သစ်ပင်တစ်ပင် ,un timbre တံဆိပ်ခေါင်းတခု,un livre စာအုပ်တအုပ်(အင်္ဂလိပ်ငွေ pound sterling ကိုလည်း livreဟုသုံးသည်) le paysage ရှုခင်း, le passage လမ်းကြောင်း၊ un verre ဖန်ခွက်တခွက်
la saison ရာသီဥတု , la moto ဆိုင်ကယ် ,une part အစိတ်အပိုင်း( အသုံးပြုပုံကိုလိုက်၍အဓိပ္ပါယ်များလှပါသည်)
ဒီတပါတ်သင်ခန်းစာမှာဝေါဟာရတွေ၊ နာမ်ကိုအများကိန်းပြောင်းနည်း၊ အသံထွက်နည်းအနည်းငယ်ပါဝင်လို့ စာများသွားရပါတယ်။ မကြာခင်မှာ လူပဂ္ဂိုလ် နာမ်စား၊ ကြိယာတွေပြီးရင် စာကြောင်းတည်ဆောက်ပြီး စကားပြောနိုင်ကြတော့မှာပါ။
နောက်တပတ်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာနာမ်စား Pronom Personnel ဆက်ပါမယ်
2 Responses to ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၃၊ ဒုတိယပိုင်း) – Paris Maung
mayhnin on February 20, 2013 at 5:36 am
အကိုပါရီမောင် ဖော်ပြတဲ့ ပြင်သစ်စာအသေးစ်ိတ်လေးတွေကိုတင်ပြပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ ပြင်သစ်စာကိုလေ့ လာနေသူတယောက်ပါ သိခြင်တာတွေလဲအများကြီးရှိပါသေးတယ် မေးခြင်တာလေးတွေကိုမေးလို့ ရမလားမသိဘူး ကျေါ်ဇူးပါပဲ။ မေနှင်း
parismg on February 21, 2013 at 2:48 am
သိထားသမျှ ပညာဝေငှခွင့်ရတာကိုပဲ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ နောက်ထပ် အခုလို အရေးကြီးတဲ့ အခန်း ၂ခု ၃ခုလောက်ပီးရင် စာကြောင်းတွေတည်ဆောက်၊ အပြောပိုင်းတွေ ပါလာပြီးရင် အချိန်တခုပေးပြီး မြန်မာပြည်က ကိုးနတ်ရှင် ကောင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာ ပြင်သစ်လို ချတ်တာအပြင် တိုက်ရိုက် အပြန်အလှန် စကားပြော လေ့ကျင့် ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ ဂျီမေးးနဲ့ စကိုက် အကောင့် နောင်မှာ ဖေါ်ပြပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။